Weather in Bali in May ~ Journey-Assist - fialantsasatra any Bali ny volana mey. toetr'andro
Pejy fandraisana » Toetr'andro sy Bali » Bali » Indonezia » Asia » Eran-tany / Faritra » Weather in Bali in May
Ny toetrandro i Bali amin'ity volana ity. Mey ny volana fiandohan'ny vanim-potoana volondaka. Ny fidiran'ireo mpizahatany dia misy mandritra ny fialantsasatry ny Mey.
Tamin'ny volana Mey, tany Bali, ny mari-pana somary mahazo aina dia mitovy amin'ny salan'ny 32 ° mandritra ny andro manerana ny nosy. Ny hafanana amin'ny alina dia mihena amin'ny hafanana 24 °. Afaka mitaingina bisikileta amin'ity mari-pana ity ianao, amin'ny andro sy ny alina. Ny hany nitazana dia ny faritra avaratry ny Nosy, izay mbola somary mangatsiaka ihany.
Ny rano ao amin'ny ranomasina any May dia mitana hafanana maharitra 28 °, izay tena tsara amin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina. Enga anie dia efa mazava ny rano. Ny onjan'ny ankamaroan'ny tora-pasika dia somary maivana ary malemy paika aza. Ny onjan-damosina dia saika tsy mitondra fanelingelenana. Ny fako eny amin'ny torapasika ihany koa dia kely indrindra. Tena tsara ny vanona amoron-dranomasina amin'ny volana may ao Bali.
Ny fanetren-tena any Bali amin'ny volana Mey dia ambany noho ny tamin'ny volana lasa teo amin'ny taona. Mampiasa 60% izany. Kely ambany kokoa ny tapany afovoany ary somary kely kokoa any amin'ny morontsiraka.
Vakansy tany Bali ny volana mey
Ny Précéditation dia mitranga amin'ny volana Mey, saingy tsara ihany fa fohy izy io ary miseho amin'ny alina. Ary amin'ny maraina sy ny lamina dia tsy hahita. 93mm ny salanisan'ny orana amin'ny antsalany ary ny salanisan'ny isan'ny andro orana dia 8 mandritra ny volana.
Ny volana may dia volana mahafinaritra ahafahan'ny onja any Bali. Mahamay sy azo vinavina ny rivotra. Ny onjan-drivotra amin'ny làlan-tany lehibe dia ampy ho an'ny fotoam-pianarana tsara ho ampahany amin'ny fialamboly hidina.